Inkqubo ye-GIS Geographic Information System (GIS)
I-AulaGEO sisindululo soqeqesho, esekwe kumjikelo wobunjineli be-geo, kunye neebhloko zemodyuli kulungelelwaniso lwe-Geospatial, Ubunjineli kunye nokuSebenza. Uyilo lwendlela esekwe "kwiikhosi zeeNgcali", kugxilwe kubuchule; oko kuthetha ukuba bajolise ekuziqheliseni, ukwenza umsebenzi wesikolo wesikolo kwizifundo ezinokulungiselela iimeko ezizezinye, ngakumbi imeko yomxholo omnye kunye ...
AutoCAD-AutoDesk, Iiphotography, cadastre, Ukufundisa i-CAD / GIS, Zobunjineli, qgis
Okulungileyo kwiindaba zeQGIS 3.X
Kuyathakazelisa indlela i-Open Source initiatives eyenze ngayo ukuzinzileyo ngendlela ezinzileyo kunye nokubonelela ngamathuba oshishino kulabo banexabiso elongezelelweyo lokufaka isandla; ngelixa uvumela ukuzinikezela kwingundoqo yoshishini ukwazi ukuba iimfuno ziya kugutywa ezinye iingcali zodwa. Phakathi kwale mizekelo, i-WordPress yami incomeka ...
Zonke iindaba ezivela kwi-QGIS
Eli linqaku lokujonga zonke iindaba ezenzeke kwi-QGIS. Okwangoku ihlaziyiwe ku-2.18. I-QGIS namhlanje yenye yezona zixhobo zikhulu zemithombo evulekileyo, ezinokubakho kukhuphiswano lwesoftware kunye nokusebenza ngendlela efanelekileyo. [isihloko esilandelayo = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Iindaba…
Iikholeji ze-QGIS eziphambili kwiSpeyin
Ukuthatha inkqubo yeQGIS ngokuqinisekileyo kwinjongo yabaninzi kulo nyaka. Ukususela kumaphulo omthombo ovulekile, i-QGIS ibe yisisombululo esicinga kakhulu, zombini ngamashishini abucala kunye nemibutho karhulumente. Ngoko, nangona uqonda i-ArcGIS okanye enye ithuluzi, yifake kwishidi lakho ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, qgis
3 27 evela 2.18 QGIS utshintsho
Xa siza ukuphelisa ubomi iinguqulelo QGIS 2.x na, kuxhomekeke oko uya QGIS 3.0, eli phepha ibonisa kuquka QGIS 2.18.11 'Las Palmas' eyathi ngokusesikweni kwinyanga kaJulayi kulo nyaka. QGIS okwangoku ine-umdla ngokwemimiselo abaxhasi ezintsha ukwanda esesikweni ngaphezu kwiinkampani ...
Python: ulwimi ekufuneka phambili geomatics
Kunyaka odluleyo ndibone indlela umhlobo wam "uFiliblu" obeka ngayo i-Visual Basic for Applications (VBA) yenkqubo apho wayeziva ekhululekile, kwaye iqhube i-Python yakhe yokufunda i-Python ukusuka ekuqaleni, ukuphuhlisa i-plugin adaptation "UMasipala we-SIT" kwiQGIS. Yisicelo esiye saqhuba ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka, qgis
QGIS, PostGIS, LADM - eNdleleni woLawulo loMhlaba yi IGAC
Ukuhlangabezana zamanyathelo ezahlukeneyo, ulangazelelo kunye nemingeni e Colombia ukugcina ubunkokheli kwi-Southern Cone kwizinto geospatial, phakathi 27 Julayi 4 Agasti, i-Centre for Research and Development of Geographic Information - CIAF Geographic Institute Agustin Codazzi ukuphuhlisa Ikhosi: Ukusebenza standard ISO 19152 ...
cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, qgis
kweminyaka 10 bokufudukela iqonga geospatial - Microstation Geographics - Oracle Spatial
Lo ngumceli-mngeni ofanayo iiprojekthi ezininzi Cadastre kunye cartography, nto leyo 2000-2010 ixesha Geographics Microstation ezihlangeneyo njenge injini leenkcukacha, ucinga izizathu ngolu hlobo lulandelayo: Le arc-esiludumbo yaba ulawulo kwaye usaqhubeka aluncedo kakhulu iiprojekthi cadastral . I-DGN yindlela ekhangayo, iqwalasela inguqulo yayo kwifayile efanayo, ...
cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, qgis
Ukungenisa i-Excel idibanisa kwiQGIS kwaye idale iiPolgons
Enye yeendlela eziqhelekileyo ekusebenziseni iiNdawo zoLwazi lweGeographic isakhiwo sokwakheka kweendawo ukusuka kwimiba evela kwintsimi. Ingaba oku kubonisa ukulungelelanisa, iindawo ezizenzekelayo okanye i-lattice of elevations, ulwazi ngokuqhelekileyo luza kwiifayile ezihlukaniswe ngama-spreadsheet ama-comma okanye i-Excel.
Office for ebulalayo QGIS
Ezinye iindlela zokusebenzisa i-QGIS kwi-Android ne-iOS yeselula
I-QGIS iye yazibeka njengesixhobo sokukhupha ikhowudi ekhulayo ngokukhawuleza kunye nesicwangciso sokugcinwa kwe-geospatial. Siyavuyela ukwazi ukuba kukho iinguqulelo ze-QGIS kumadivayisi eselula. Ukusetyenziswa okucacileyo kwezicelo zeselula kuthetha ukuba izixhobo ze desktop zikhetha ukuphuhlisa iinguqu zokusetyenziswa kwiifowuni okanye iipilisi. I ...
Okufumaneka, Geospatial - GIS, qgis
QGIS 3.0 - Njani, nini kunye nantoni na; kuthetha
Abaninzi bethu bayazibuza: i-QGIS 3.0 iya kukhutshwa nini? Kunyaka ophelileyo (i-2015) iqela leprojekthi liqale ukuphanda ngexesha kunye nendlela i-QGIS 3.0 iza kukhutshwa ngayo. Bathembisa, ngokwe-Anita Graser post, ukuba baya kubonisa ngokucacileyo kubasebenzisi kunye nabaphuhlisi bezicwangciso zabo phambi ...
Qgis - Thematizing iziza ezisekelwe intsimi yeqhosha cadastral
I-Case: Ndineepakethi zikamasipala, ngeenkcukacha zekhowudi ye-cadastral kwifom elandelayo: Isebe, uMasipala, iCandelo, impahla. okokuba utyunjlomelo luhlanganiswa njengoko kuboniswa kumfanekiso: Umzekelo: 0313-0508-00059 Iimfuno Iimeko ke ukuba ndinomdla ekubeni ndinako ukuzenzele izicwangciso ezisekelwe kwikhonkco yesibini, oku ...
Qgis - Umzekelo weendlela ezona zilungileyo kwi-OpenSource model
Ngalo lonke ixesha wahlala inkampani okanye iziko ofuna ukuphumeza indlela yolawulo iqonga indawo, esetyenziswa ukuva amazwi ezininzi ezimbi malunga imifuziselo OpenSource, lo mbuzo, kunye utshintsho olwenzekileyo luncinane kakhulu. Ngubani ophendula iQGIS? Kubonakala ngathi sinoxanduva kwaye siqhelekileyo, ukuba umenzi wesigqibo ufuna ukuxhasa ...
Ukuthelekisa nokuhlukana phakathi kweQGIS kunye neArcGIS
abahlobo GISGeography.com baye benza into olukhulu uthelekisa GQIS kunye ArcGIS, akukho ngaphantsi kwe izihloko 27. Kucacile ukuba ubomi zombini amaqonga kakhulu, ucinga ukuba QGIS imvelaphi asusela 2002, kanye njengoko wemka oko uguqulelo oludlulileyo esitalini ye ArcView 3x ... ukuba esele ifakiwe ...
Ngenisa i-OpenStreetMap idatha kwi-QGIS
Isixa sedatha esise-OpenStreetMap sininzi, kwaye nangona singagqithanga ngokupheleleyo, kumaxesha amaninzi ichanekile ngakumbi kunedatha ngokuqhelekileyo eqokelelwa ngamaphepha eempawu ze-1: 50,000. Ku-QGIS kukukhulu ukulayisha loluhlu njengemephu yangemvelaphi efana nesithombe seGoogle ...
Vula ifayile yeGML ngeQGIS kunye ne-Microstation
GML ifayile fomati yenye kakhulu ababazi abaphuhlisi kunye abasebenzisi GIS, kuba ngaphandle kokuba ibekwindlela exhasiweyo mgangathweni mnye OGC, lisebenza kakhulu ukuba ukudluliselwa kunye nokwabelana data kwisicelo GML i isicelo web.El ulwimi lwe-XML yeenjongo ze-geospatial, i-acronyms yayo ithetha ...
Bonisa idatha ye-QGIS ku-Google Earth
I-GEarthView iyi-plugin ebalulekileyo ekuvumela ukuba wenze imbonakalo ehambelanayo ye-Quantum GIS yokuthunyelwa kwi-Google Earth. Indlela yokufakela iplagin Ukuze uyifake, kufuneka ukhethe: I-Add-ons> Lawula i-add-ons kwaye uyifune, njengoko kuboniswe kumfanekiso. Emva kokuba i-plugin ifakwe, ingaqwalaselwa kwibar yebar
Umhlaba ka-Google QGIS
Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu, qgis
I-OpenGeo Suite: Umzekelo omhle we-GIS Software eyenzelwe ubuthathaka bohlobo lwe-OSGeo
Namhlanje, ubuncinci kwiimeko ze-geospatial, bonke abaqeqeshiweyo abanengqondo yokungathathi hlangothi bayaqonda ukuba isofthiwe yomthombo ovulekileyo ikhulile njengesoftware yezorhwebo, kwaye ngezinye iindlela ziphakamileyo. Isicwangciso semigangatho sisebenza kakuhle. Nangona umlinganiso walo wokuhlaziywa ungathandabuzeki phambi kwamandla afunayo ...
GeoServer Bavulekileyo PostGIS QGIS
Page 1 Page 2 Page 3 kwiphepha elilandelayo